UA55KU6000K | UA55KU6000KXMR | Samsung MM
ယခု ဆိုက် တွင် Cookie ကိုအသုံးပြုထားပါသဖြင့် Cookie အသုံးပြုမှုကို လက်ခံပါက လက်ခံပါသည် ဆိုသောခလုတ်ကို ကလစ်နှိပ်ကာ ဆက်လက် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိရန်.
တည်နေရာဒေသ သို့မဟုတ် ဘာသာစကားကို ရြေးခ်ယ္ပါ။
Galaxy Watch LTE
အက်ပ်များ နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ
Introducing 2019 QLED
One giant leap for resolution
Simply add, during wash
1 Depth Menu ကို ပြန်သွားရန်
ရှာသည့် အလွှာ ဖွင့်ရန်
ရှာရန် အဓိကစာလုံး ရိုက်ထည့်ပါ
ရှာဖွေမှု သမိုင်းကို ဖျက်ရန်
တောင်းပန်ပါတယ်။ သင့်၏လှည်းတွင် နေရာလွတ်မရှိတော့ပါ။
ပေါ်နေသော အလွှာများ ပိတ်ရန်
ဤထုတ်ကုန်မရှိလျှင် အသုံးပြုထားသော အထူးလျှော့ဈေးကို မရွေးချယ်နိုင်ပါ။
ဤထုတ်ကုန်ကို ဖယ်ဖို့ သေချာပြီလား?
ဝယ်ချင်သည့်စာရင်းသို့ ရွေ့ရန် ဖျက်ရန်
Samsung.com သို့သွားရန် ဤအကွက်ကို အမှန်ခြစ်ပါ။
SAMSUNG.COM သို့ ဆက်သွားရန် Pageမှ ထွက်ရန်
ထုတ်ကုန် ဦးစားပေးမှုကို အဆင့်မြှင့်ခြင်းဖြင့် သင့်အတွက် အကြံပြုချက်များ ပေးနိုင်အောင် ကူညီပါ။
TV & AV /
အားလုံး Television /
UHD TV /
2016 4K UHD flat Smart TV KU6000
ဘယ်မှာ ဝယ်ရမလဲ အခု ဝယ်ရန် လှည်းသို့ ထည့်ရန် ဘယ်မှာ ဝယ်ရမလဲ
Brightness comes to you
HDR Premium နဲ့ဆိုရင် အရင် HDR content ကြည့်နေစဉ် တီဗွီ ဖန်သားပြင်ရဲ့ အတောက်ပဆုံးအပိုင်းမှာ ဖုံးကွယ်နေတဲ့ မမြင်နိုင်သော အချက်တွေကိုတောင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ ရုပ်ရှင်ရုံလိုမျိုး ခံစားရမယ့် HDR experience ကို သင့် ဧည့်ခန်းမှာ ရရှိနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
Experience more accurate and natural colours
Samsung မှ တကယ့် လက်တွေ့ဘဝနဲ့ တူတဲ့ အရောင်မျိုးစုံနှင့် အရိပ်မျိုးစုံကို ဖော်ပြပြီး သဘာဝနဲ့ နီးစပ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးမယ့် UHD TV လို့ခေါ်တဲ့ PurColour အတွက် အထူးအရောင် နည်းပညာကို လေ့လာနေပါတယ်။ 8 million pixels ကို သုံးထားတဲ့ UHD display (သာမန် Full HD display ထက် ၄ဆ ပိုသော) နဲ့ဆိုရင် အသေးစိတ်ပုံရိပ်ကို ဖန်တီးဖို့ အရောင်ထိန်းညှိမှုတွေ ပိုလိုအပ်မှာပါ။ Conventional UHD TVs မှာ အရောင်ထိန်းညှိမှုအမှတ် ၂၇ ပါပြီး PurColour ဆိုရင် ၇ဆ ပိုများသွားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အရောင်အသွေးကို ရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Every detail in stunning 4K UHD resolution
Full HD TV ရဲ့ ၄ဆကောင်းမွန်သော ရုပ်သံပြတ်သားမှု။ သင် ကြည့်သမျှ အရာအားလုံးဟာ တကယ့်အစစ်နှင့်တူသည့် အရောင်နှင့် အလင်းအတိုင်းဖြစ်သည်။
Quick and Single Access to all Content Sources
New Smart Hub ဖြင့် Live TV, Over The Top(OTT), ဂိမ်းနှင့် အခြားအရာများကို ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူသည် တီဗွီ ဖွင့်လိုက်သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သူတို့ကြိုက်ရာကို ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အင်တာနက် လိုအပ်သည်။ နိုင်ငံအားလုံးနှင့် ဘာသာစကားအားလုံး မရနိုင်ပါ။
Upscale content for vivid image quality
Samsung’s UHD Picture Engine က အရည်အသွေးနိမ့်လျှင်တောင်မှ UHD အဆင့်နီးပါးရှိ ဓာတ်ပုံကို ပေးစွမ်းသည်။ သင်ပြောင်းချင်သော ပုံ ကို သာလွန်သော အရည်အသွေးသို့ ပြောင်းလဲရန် ဆန်းသစ်သော အဆင့် ၄ ဆင့်သာလိုသည်။
မူလရင်းမြစ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဓာတ်ပုံ အရည်အသွေး ခြားနားသည်။
Enhanced contrasts for your viewing experience
UHD Dimming နည်းပညာက တကယ့် အပြင်ရှိ မြင်ကွင်းအတိုင်းရှိသည့် ဓာတ်ပုံ အရည်အသွေးကို ပေးသည်။ နဂို Micro Dimming ထက် ပို ကောင်းမွန်ပြီး အရင်နှင့်မတူသည့် အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းသည်။
Step up your picture quality to near-UHD
Ultra Clean View က အခြေအနေကို လေ့လာသုံးသပ်ပြီး အဆင့်မြင့် algorithm နှင့် ဆူညံသံများကို လျော့ချပေးသည်။ ဗွီဒီယို ရင်းမြစ်က Full HD quality ထက် နည်းရင်တောင် UHD အဆင့်နည်းပါးဖြင့် ဓာတ်ပုံများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ဓာတ်ပုံအရည်အသွေးသည် မူလရင်းမြစ်နှင့် ကွာခြားနိုင်သည်။
တီဗွီဖန်သားပေါ်ကြည့်ရူအသုံးပြုနေသော အကြောင်းအရာကိုလည်း ရှယ်ရာလုပ်နိုင်သည်
ဖုန်းနှင့် PC မှ စပြီး Smart TV အထိ Samsung Smart View app ကို သုံးကာ ဓာတ်ပုံရိုက်၊ ဗွီဒီယိုနှင့် သီချင်းများ နားထောင်နိုင်ပါပြီ။ စက်အများစုနှင့် လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
TV နှင့် mobile device ကို တူညီသော ကွန်ရက် (AP) တွင် Setup လုပ်ရန် လိုအပ်သည်။ ပံ့ပိုးပေးထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များသည် OS နှင့် devices များပေါ်မူတည်၍ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ပံ့ပိုးပေးထားသော စက်များအကြောင်း အသေးစိတ် သိလိုပါက www.samsung.com/smartview ကို ဝင်ကြည့်ရန်။
အားကောင်းတဲ့ Quad Core Processor က Samsung Smart TV ကို မြန်ဆန်စေပြီး ခိုင်းစေမှုနှင့် apps များကို ချက်ချင်း run စေပါတယ်။ Multi-Link Screen နှင့် အလုပ်များကို တစ်ခါတည်း မြန်ဆန်စွာ လုပ်နိုင်ပါပြီ။
Tizen က Smart TV လုပ်ဆောင်ချက်ကို မြန်ဆန်သော boot times နှင့် နောက်တစ်ဆင့်ကို ခေါ်သွားစေပါတယ်။ Live TV နှင့် သင့် apps များအားလုံးကို လည်း လျင်မြန်စွာ ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းရှိ နာမည်ကြီးသော VOD apps များကိုတောင် ပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dive into your video content
Motion Rate 120 က flicker-free video content ပါဝင်ပြီး အထင်ကြီးစရာကောင်းလောက်တဲ့ မြင်ကွင်းကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ refresh rate နှင့် backlight နည်းပညာက အနှောင့်အယှက်ကင်း မြန်ဆန်တဲ့ ဗွီဒီယိုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။
တီဗွီမှာ ပါရှိတဲ့ Wireless Lan သင့်တီဗွီကို ကြိုးများမလိုဘဲ အင်တာနက်နှင့် တိုက်ရိုက် ချိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ဒီ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှုပါဝင်တဲ့ လှပတဲ့ တီဗွီ ဒီဇိုင်းက သင့်ကို ပျော်ရွှင်စေမှာပါ။
ဖြေဖျော်မှုများကို တီဗွီဖြင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
ConnectShare ကိုသုံးပြီး အမျိုးစုံလင်လှတဲ့ ဇာတ်လမ်းများကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။ USB or HDD ကို တီဗွီမှာ တပ်ဆင်လိုက်တာနဲ့ ရုပ်ရှင်၊ သီချင်း နှင့် ဓာတ်ပုံများကို ကြီးမားတဲ့ ဖန်သားပြင်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီနော်။
ဖတ်ရှုနိုင်သော ဖိုင် Format များကတော့ AVI ၊ ASF ၊ MP3 ၊ JPEG နဲ့ အခြားတို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ အသုံးပြုပုံလက်စွဲတွင် ဖတ်ရှုနိုင်သည့် Format အားလုံးကို ပြည့်စုံစွာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
Samsung TV များတွင် HDMI inputs ပါဝင်တဲ့အတွက် သင့်ရဲ့ ဧည့်ခန်းကို Multimedia ဖျော်ဖြေရေးစင်တာတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ HDMI ကို သင့်တီဗွီနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး များပြားလှတဲ့ စက်တွေထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဇာတ်လမ်းကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Screen Size 55"
Resolution 3,840 × 2,160
Quantum Dot Display N/A
Moth Eye N/A
Screen Curvature N/A
10 bit Support N/A
Picture Engine UHD Up-Scaling
Motion Rate 100
PQI (Picture Quality Index) 1300
HDR (High Dynamic Range) HDR Premium
Dynamic Contrast Ratio Mega Contrast
Precision Black (Local Dimming) N/A
Active Crystal Color N/A
Wide Color Enhancer (Plus) N/A
Auto Depth Enhancer N/A
Contrast Enhancer Yes
Auto Motion Plus Yes
DTS Codec Yes
Sound Output (RMS) 20W
Speaker Type 2CH(Down Firing w/Bass Reflex)
Wallmount Sound Mode Yes
Multiroom Link Yes
TV SoundConnect N/A
BT Headset Support N/A
Samsung SMART TV Yes
Cloud Game N/A
TV Plus N/A
Automated Content Recognition (ACR) N/A
Voice Recognition N/A
TV to Mobile - Mirroring Yes
Mobile to TV - Mirroring, DLNA Yes
Samsung SMART View Yes
Bluetooth Low Energy N/A
WiFi Direct Yes
TV as Hub Support N/A
TV as Things Support N/A
IoT Client Application N/A
Sound Mirroring N/A
Dongle Compatibility (3G / LTE / WiFi) N/A
Analog Clean View Yes
Sports Mode Advanced
Sports Mode Auto Highlight Support Yes (Digital RF/Analog RF/Composite), 싱가폴 Yes (Digital RF)
Senior Mode N/A
Image Booster N/A
Family TV 2.0 N/A
Local Cinema Mode N/A
Digital Broadcasting DVB-T2(VN: DVB-T2C)
Analog Tuner Yes
2 Tuner N/A
CI (Common Interface) N/A
Data Broadcasting N/A
Component In (Y/Pb/Pr) 1
Composite In (AV) 1(Common Use for Component Y)
Ethernet (LAN) Yes
Audio Out (Mini Jack) N/A
Digital Audio Out (Optical) 1
RF In (Terrestrial / Cable input / Satellite input) 1/1(Common Use for Terrestrial)/0
Ex-Link ( RS-232C ) N/A
CI Slot N/A
HDMI A / Return Ch. Support Yes
HDMI Quick Switch Yes
Wireless LAN Adapter Support N/A
Wireless LAN Built-in Yes
Design JU6000 컨셉 수정
Bezel Type VNB
Slim Type Slim
Front Color Black
Light Effect (Deco) N/A
Stand Type V-Shape
Swivel (Left/Right) N/A
Instant On Yes
Accessibility Enlarge/ High contrast
Digital Clean View Yes
One Connect (Jack) N/A
BD Wise Plus N/A
Caption (Subtitle) Yes
Channel List USB-Clone Yes(SG)
Connect Share™ (HDD) Yes
ConnectShare™ (USB 2.0) Yes
Connect Share™ Transfer N/A
Embeded POP Yes
Extended PVR Yes
OSD Language Local Languages
BT HID Built-in N/A
USB HID Support Yes
Teletext (TTX) Yes
Time Shift Yes
MBR Support N/A
Ultra Clean View Yes
Eco Sensor Yes
Energy Efficiency Class N/A
Power Supply AC100-240V 50/60Hz
Power Consumption (Stand-by) N/A W
Power Consumption (Energy Saving Mode) N/A W
Power Consumption (Typical) N/A W
Peak Luminance Ratio N/A %
Yearly Power Consumption (EU standard) N/A kWh
Package Size (WxHxD) 1485.0 x 819.0 x 154.0 mm
Set Size with Stand (WxHxD) 1242.6 x 787.5 x 310.5 mm
Set Size without Stand (WxHxD) 1242.6 x 718.4 x 63.2 mm
Remote Controller Model TM1240A
Batteries (for Remote Control) Yes
Samsung Smart Control (Included) N/A
Ultra Slim Wall Mount Support N/A
Mini Wall Mount Support Yes
Vesa Wall Mount Support Yes
Floor Stand Support N/A
IoT Dongle (Included) N/A
Slim Gender Cable Yes
ဆမ်ဆောင်း တီဗွီအား Firmware အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လုပ်ဆောင်နည်း
ဆမ်ဆောင်း တီဗွီအား Firmware အဆင့်မြှင့်တင်ရန် လုပ်ဆောင်နည်းsee the answer
Samsung TV အလိုလျောက် ပိတ်နေ ပွင့်နေခြင်း
Samsung TV အလိုလျောက် ပိတ်နေ ပွင့်နေခြင်းsee the answer
65" UHD 4K Smart TV RU7400 Series 7
Bixby on TV
Premium UHD 4K Smart TV NU8000 Series 8
Dynamic Crystal Colour
လဲလှယ်မှု နှင့် စုပေါင်း option နှစ်ခုလုံးကို ရွေးချယ်ထားပါကနောက်ထပ်လဲလှယ်မှု အတွက်ိdiscount ပါဝင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။